Global ကွန်ပျူတာသင်တန်း: စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာ ရဲ့ သမိုင်းအစ
စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာ ရဲ့ သမိုင်းအစ
Two popular types of personal computers are the IBM compatible and Macintosh computers. The first personal computer was produced by IBM in 1981 and was called the IBM PC. In 1984, Apple Computer introduced the Macintosh, or Mac, and it became the first widely sold personal computer withagraphical user interface or GUI (pronounced gooey). Although both IBM and Apple computers are personal computers, the term PC came to refer to IBM or IBM-compatible personal computers.
ကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကတော့ IBM compatible နှင့် Macintosh တို့ပါဘဲ၊ ပထမဦးဆုံး လူတစ်ဦးတည်းသုံးကွန်ပျူတာကို IBM ကုမ္ပဏီမှ 1981 ခုနှစ်မှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီ ကွန်ပျူတာကို IBM PC လို့ အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်၊ 1984 မှာတော့ Apple ကုမ္ပဏီမှ Macintosh (ခေါ်) Mac ကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် .... ပထမဦးဆုံး Apple ရဲ့ PC ကွန်ပျူတာလောကမှာ အများဆုံးအရောင်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒါ Window ရဲ့ အစလိုတောင် ဆိုရမှာပါ၊ ဘာကြောင်းလည်း ကွန်ပျူတာ သမားတွေသုံးနေတာက Command Line Interface ထဲမှာ သုံးနေကြတာပါ .. ခု Apple က Graphical User Interface ရုပ်ပုံ Icon များနှင့် ခိုင်းလို့ရတဲ့ PC ကို စထုတ်လုပ်လိုက်လို့ပါဘဲ၊ နှစ်မျိုးစလုံးဟာ လူတစ်ဦးတည်း PC ကွန်ပျူတာစနစ်ကို စပြီးထုတ်လုပ်လိုက်တာပါဘဲ၊ PC သမိုင်းအစ ... IBM က ၊ လူတစ်
တည်းသုံးကွန်ပျူတာ IBM compatible.
Apple now producesaMacintosh computer called the iMac, which isadesktop computer that features an all-in-one design. This means all the internal components are located behind the monitor, rather than inatower case, which is customary in desktop computers.
While our training is intended for people who use PCs and the Windows operating system, some of our information also applies to Macintosh computers.
Apple ကလည်း Macintosh ကွန်ပျူတာအမျိုးအစားကို iMac ဆိုပြီး ထုတ်လုပ်ပါတယ်၊ အဲဒီ iMac ကို အကုန်လုံး တပါတည်းပါဝင်အောင် တည်ဆောက်ထားပါတယ်၊ ဆိုလိုတာကတော့ အတွင်းပိုင်းအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကို Monitor ရဲ့နောက်ဘက်မှာ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်၊ ဆိုလိုတာ System Unit ကို သီးခြား စီမထားဘဲ တတွဲလိုက် ထုတ်လုပ်တာကို ပြောခြင်းပါ၊ အဲဒါဟာ စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဘဲဖြစ်ပါတယ် အဲဒီကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားကို PC အနေဖြင့် လူတစ်ဦးတည်းသုံး ပုံစံနှင့် စက်လည်သော စနစ် ပရိုဂရမ်များကို တပါတည်း ထည့်သွင်းစေခဲ့ပါတယ်၊ Macintosh computers သုံးနည်းကို သီးသန့် တင်ပေးသွားပါမယ် ၊
Posted by Zayyar Ting at 11:44 PM
What is window operaiting system? ကွန်ပျူတာ ၀င်းဒု...
ကွန်ပျူတာ ဆိုတာ ဘာလဲ?
စားပွဲတင် ကွန်ပျူတာ၏ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများ
စားပွဲတင် ကွန်ပျူတာ အခြေခံအစိတ်အပိုင်း
Eassy On the Role Of Computers in Everyday Life (ေ...
What is Windows 8? ၀င်းဒိုးနံပတ် "၈"
How is Windows 8 Different From Earlier Versions?
Online Features in Windows 8
Other Windows 8 Features
How Will You Use Windows 8?
ဓါတ်ပုံ Layer များ၏လုပ်ငန်း-၃
Working with layers There are many different ways to work with the layers in your document. For example, you can show and hide different ...
လူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀နှင့် ကွန်ပျူတာအခန်းကဏ္ဍများဆက်စပ်ပုံ (ဆောင်းပါး)
ကွန်ပျူတာဆိုတာဟာ သိပ္ပံပညာက ပေးလိုက်တဲ့ ထူးခြားအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပါဘဲ၊ ကွန်ပျူတာစက်ပစ္စည်းများ ဟာ Charles Babbage က မ...
ဓါတ်ပုံပြင်ခြင်း Color Corrections
Color corrections There will be times when you may want to adjust the colors in an image. For example, you may want to modify the color i...